खुशीको खबर ! नेपाली फुटबलर प्रकाश बुढाथोकीले पाए भारतको आइलिग खेल्ने अवसर |
खुशीको खबर ! नेपाली फुटबलर प्रकाश बुढाथोकीले पाए भारतको आइलिग खेल्ने अवसर
२०७७, २० माघ मंगलवार १०:२६ February 2, 2021 ताजा खबरखेलकुद
काठमाडौं । नेपालका लोकप्रिय राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी प्रकाश बुढाथोकीले एसियाकै प्रतिष्ठित मानिने भारतको आइलिग खेल्ने अवसर पाउनुभएको छ । भारतको मणिपुरस्थित नेरोका एफसीमा अनुबन्धित भएपछि उहाँले उक्त अवसर पाउनुभएको हो । आइलिग भारतको ‘ए’ डिभिजन क्लबहरु खेल्ने राष्ट्रिय लिग हो।
धरान उपमहानगरपालिका–२० पटनाली निवासी बुढाथोकीलाई यहाँको पुरानो फुटबल क्लब धरान फुटबल क्लबले आज बिदाइ गरेको छ । एन्फा १ नं प्रदेश अध्यक्ष तथा क्लबका अध्यक्ष किशोर राईले सफलताको शुभकामना दिँदै बिदाइ गर्नुभयो । क्लबले उहाँलाई रु आठ हजार नगद पनि प्रदान गरेको थियो ।